“Mihinana ny… ananany” | NewsMada
“Mihinana ny… ananany”
Mitodika any amin’ny any amin’ny Fitsarana miady amin’ny kolikoly, na ilay antsoina amin’ny teny frantsay hoe “Pôle anti-corruption” (Pac) ny mason’ny rehetra, manomboka izao. Izany hoe, aorian’izao nandefasan’ny Birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly (Bianco) izao ny antontan-taratasim-panadihadiany mikasika ilay raharahan-kolikoly nalaza, teny amin’ny Antenimerampirenena, herintaona lasa izay. Ilay resaka malety nisy volabe nozaraina – nanambazana angaha no marimarina kokoa – ireo depiote mpomba ny fitondrana Rajaonarimampianina tamin’izany fotoana izany handany ilay lalàna fehizoro momba ny lalàm-pifidianana.
79, araka ny fantatra, ny isan’izy ireo ary hoe samy nahazo… 50 000 000 Ar avy. Raha lazaina amin’ny teny hafa, mitovy amin’ilay karama farany ambany 200 000 Ar ho an’ny olona 250 isa. Volabe, volam-panjakana azo tao anatin’ny indray mielatra. Tao anatin’ny fotoana fohy e! Natao fafy katrana tamin’iretsy “olom-panjakana”, heverina fa manana ny maha izy azy, raiamandreny avy any amin’ny faritra niaviany avy… Olom-panjakana noheverina ho hitsikitsika ivavahana, hitondra ny fahoriana sy ny fitarainam-bahoaka… Hay ka tena papango nifaoka ny akoho, amboadia mitafy hodi-janak’ondry… Tia kely, fanetribe, tsy matahotra an’Andriamanitra…
Ny raharaha aza, fantatsika rehetra izany: ny ankamaroan’ireo 79 voarohirohy, mba tsy ilazana hoe izy rehetra, mbola isan’ny kandidà mpifaninana hofidina ho solombavambahoaka manaraka eo indray. Izany, rey olona, ny zava-misy eto amintsika. Izany ny afitsoky ny mpanao politika eto amintsika. Amin’ny fomba ahoana àry no iandrandrana fampandrosoana ny firenena amin’ny olona toy izany? Tena nofinofy satria ny “tanana efa zatra mitsotra, sarotra avonkina”, hoy ny fitenenana.
Izay ny ilazàna ery ambony fa mitodika any amin’ny Fitsarana ny mason’ny rehetra amin’ity raharaha ity. Ny fitsarana izay efa nilokaloka, nanambara ampahibemaso, fa tsy hamela ny Antenimierampirenena ho fialokalofan’ny jiolahy mpanao kolikoly sy mpambotry firenena. Raha ny tokony ho izy aza, tokony hotsaraina alohan’ity fifidianana solombavambahoaka ity izy ireo mba tsy hampanano sarotra ny raharaha. Sao hipoitra indray avy eo ny hoe “tsy azo enjehina”. Dia ho tsimatimanota eny hatrany izany. Ry zalahy, mihinana izay nangalariny sy norobainy fa ny vahoaka ihany ny mihinana… ny ananany kely eo!